Nahena 18 Volana ny Sazy 12 Taona an’Ilay Iraniana Mpanao Sariitatra Atena Farghadani · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2016 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, عربي, русский, Español, English
Atena Farghadani niatrika fitsarana tamin'ny 2015 noho ny fiampangana ka anisan'izany ny famingavingana mpikambana ao amin'ny parlemanta sy propagandy manohitra rafitra . Sary nalaina tamin'ny pejy Facebook “Afaho Atena”.
Efa natao hivoaka ny fonja ao Iran i Atena Farghadani, mpikatroka sady mpanao sariitatra rehefa nahenan'ny fitsarana ambony 18 volana ny saziny 12 taona .
Tamin'ny 25 Aprily nilaza ny Tsy Heloka ny Fanaovan-gazety, fikambanana mandrakitra ho tahirin-kevitra ny fanenjehana Iraniana mpanao gazety, fa ho afahana izy ny 11 May 2016, araka ny mpisolovavany.
Tamin'ny 2015, notsaraina tao iran i Farghadani noho ny sariitatra mahakasika ny fanaovana fanabeazana aizana. Nomeny endrika biby tao anatin'izany ny mpikambana ao amin'ny parlemanta Iraniana. Tamin'izay fotoana izay, ny parlemanta tao amin'ny firenena hifidy volavolan-dalàna mba hametra ny fahazoana manao fanabeazana aizana an-tsitrapo.
Notsaraina tao amin'ny antsoina hoe Fitsarana Revolisionera izy, izay fantatra amin'ny fanomezana sazy henjana amin'ny fahadisoana maivana.
Tamin'ny Jona 2015, voaheloka ho manaparitaka fampielezan-kevitra manohitra ny rafitra, naniratsira mpikambana ao amin'ny parlemanta amin'ny alalan'ny sary hosodoko, sy nanala baraka ny mpitarika faratampony i Farghadani, ka voasazy 12 taona an-tranomaizina. Tamin'izany fotoana izany i Hadi Ghaemi ao amin'ny Fanentanana Iraisampirenena ho an'ny Zon'olombelona ao Iran naneho hevitra hoe: “Mitoetra ho Tsipika tsy azo ihoarana hatrany ao Iran ny fanehoana ny tsy fitovizan-kevitra am-pilaminana . Raha mandika izany ianao dia mety hiditra am-ponja. “
Araka ny Human Rights Watch, dia mety ho lasibatra manokana i Farghadani noho ny fifandraisany tamin'ny fianakavian'ireo gadra politika maty tany am-ponja taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tsy manaram-penitra tao Iran tamin'ny 2009.
Niatrika ny herisetran'ny manam-pahefana tany am-ponja i Farghadani nandritra ny fitazonana azy. Araka ny tatitra iray avy amin'ny Firenena Mikambana Mpitatitra manokana momba ny Zon'olombelona ao Iran (jereo ny pdf ):
Tamin'ny 10 Janoary 2015, voaantson'ny sampana Fitsarana Revolisionera laharana faha 15 Ramatoa Atena Farghdani, ary tao no nisamborana sy nidarohana azy teo imason'ny ray aman-dreniny. Tamin'ny fanoheran-dRamatoa Atena, dia nentina tao amin'ny efitrano fitsarana izy ary nopaina sy nokapohina indray, tamin'izay fotoana izay voalaza fa teo anoloan'ny mpitsara. […] Nandritra ny roa volana tao am-ponja, dia voalaza fa natokan-toerana izy nandritra ny 20 andro , ary henjana koa ny fisavana sy ny fampijaliana azy. Voalaza ihany koa fa nirotsaka nanao fitokonana tsy nihinan-kanina izy ho fanoherana ny fomba nitazonana azy tao am-ponja, ny tsy nahafahany naka mpisolovava mpiaro ary ny tsy fahazoany nifandray tamin'ny fianakaviany.
Araka ny tatitra hafa nataon'ny Firenena Mikambana, “voalaza fa voatery nisedra andrana amin'ny maha-virjiny sy ny fitsapana fitondrana vohoka,” ihany koa izy, izay nohamarinin'ny manampahefana Iraniana fa ho valin'ny “fanaovana famingavingana ara-nofo natao taminy tamin'ny tranonkala sasany.”
Nandrisika ny andrimaso ho mailo i Ann Telnaes ilay nahazo loka Pulitzer tamin'ny fanaovana sariitatra fa tena navoaka tokoa i Farghadani :
Ho an'ireo mpanao sariitatra rehetra manerana izao tontolo izao:aleo isika manaramaso sy miteny ho an'i Atena Farghadani https://t.co/nYfb7t9cJO — Ann Telnaes (@AnnTelnaes) 25 April 2016
Ny fitateram-baovaon'ny raharaha Atena Farghadani tato amin'ny Global Voices teo aloha:
Hiakatra Fitsarana Noho Ny Sariitatra Nataony Momba Ny Fanabeazana Aizana Ao Iran i Atena Farghadani[mg]
Nahemotra Ny Famoahana ny Didim-pitsarana An'ilay Mpanakanto Iraniana Any Am-ponja, Atena Farghadani[mg]
Atena Faraghdani, Nosazian'i Iràna Hifonja 12 Taona sy Tapany Noho Ny Resaka Sariitatra[mg]